Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Desambra 2018 à 06:26
22 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Desambra 2018 à 06:13 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 18 Desambra 2018 à 06:26 (hanova) (esory)
k (Nanisy lohatenim-pizaràna)
Ny [[Advento]] na [[Advento|Fiaviana]] dia fotoana maharitra efatra herinandro mialoha ny [[Noely]] na [[Krismasy]] manomboka amin'ny andro Alahady manodidina ny 30 Novambra. Fotoana fiomanana alohan'ny fankalazana ny [[Fahaterahan'i Jesoa|nahaterahan'i Jesoa Kristy]] izany. Fiangonana kristiana maro no mitandrina sy mankalaza ny Advento amin'ny maha andro fiandrasana ny fankalazana ny nahaterahan'i Jesoa Kristy (dia ny [[Noely]] na [[Krismasy]]) sy ny fiaviany fanindroany ety an-tany azy.
Ny Advento no fanombohan'ny taom-piangonana tandrefana sady manomboka amin'ny Alahady fahefatra alohan'ny Noely na Krismasy, izay atao hoe Alahadin'ny Advento, dia ny Alahady manakaiky ny 30 Novambra (ao amin'ny [[Fiangonana katolika romana|Katolika romana]], ny [[Ortodoksa tandrefana]], ny [[Anglikanisma|Anglikana]], ny [[Loteranisma|Loterana]], ny Moraviana, ny Presbiteriana, ny [[Metodisma|Metodista]]). Raha maharitra efatra herinandro ny fotoam-piandrasana ho an'ny Fiangonana katolika sy Protestanta dia enina herinandro kosa ny fari-potoan'ny Advento ho an'ny Fiangonana ortodoksa noho izy ireo mankalaza ny nahaterahan'i Jesoa amin'ny [[Epifania]].
Fotoana manetriketrika ny Advento izay anombohan'ny taom-piangonana. Tsy manao fanamasinam-panambadiana ny [[Fiangonana katolika]] mandritra io fari-potoan'ny Advento na FiandrasanaFiaviana io<ref name=":0"><small>"Avent", ''Microsoft Encarta'' 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation.</small></ref>. Ny volomparasy no loko litorjika ampiasain'ny Fiangonana katolika sy ny ankabetsahan'ny Fiangonana protestanta, nefa ny Fiangonana anglikana sy ny Fiangonana loterana dia mampiasa ny manga.▼
Avy amin'ny [[Fiteny latina|teny latina]] hoe ''Adventus'' ny hoe ''Advento'' ka midika hoe "fiaviana" na "fahatongavana". Fotoana fanombohan'ny taom-piangonanany Advento. Ny teny latina hoe ''Adventus'' dia nandikana ny [[Fiteny grika|teny grika]] hoe ''parousia'' izay ampiasaina hilazana ny [[Fiavian'i Kristy Fanindroany]].▼
▲Fotoana manetriketrika ny Advento izay anombohan'ny taom-piangonana. Tsy manao fanamasinam-panambadiana ny [[Fiangonana katolika]] mandritra io fari-potoan'ny Advento na Fiandrasana io<ref name=":0"><small>"Avent", ''Microsoft Encarta'' 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation.</small></ref>.
▲Avy amin'ny [[Fiteny latina|teny latina]] hoe ''Adventus'' ny hoe ''Advento'' ka midika hoe "fiaviana" na "fahatongavana". Fotoana fanombohan'ny taom-piangonananypiangonana ny Advento. Ny teny latina hoe ''Adventus'' dia nandikana ny [[Fiteny grika|teny grika]] hoe ''parousia'' izay ampiasaina hilazana ny [[Fiavian'i Kristy Fanindroany]].
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/960519"